VONO OLONA MAHATSIRAVINA : Notombotombohana ny antsy ny vatan’ilay tovolahy
Tovolahy iray vao erotrerony manodidina ny 25 taona no maty novonoina tamin’ny fomba feno habibiana. Rehefa tapitra ny ainy dia narian’ireo nahavanon-doza teny amoron-dalana ny vatana mangatsiakany. 19 avril 2017
Ny sabotsy antoandro lasa teo no nahitan’ny olona ny razana tao an-tanànan’Antanamitarana ao anatin’ny Distrikan’Antsiranana faharoa. Tsy fantatra izay antony nahatonga ilay herisetra hatreto. Tamin’ny fomba feno habibiana tanteraka no fantatra fa namonoana an’ilay tovolahy. Feno ratra ny vatany iray manontolo, nombotombohana tamin’ny antsy hatrany an-tampon-doha ka hatrany am-paladia. Nihoron-koditra izay nahita ny razana.
Ankoatraizay voalaza ihany koa fa mbola noloahana tamin’ny zava-maranitra ny faritry ny lohany iny. Rehefa nidina teny an-toerana nanao ny fanadihadiana ny Zandary dia fantatra fa mponina eo amin’ilay tanàna nahitana ny razana ity namoy ny ainy. Tamin’ny alalan’izay no noentin’izy ireo nanaovana ny famotorana ka nahasaronana lehilahy iray izay isan’ny mpiara-monina aminy ihany. Ity farany no noahiahian’ny olona no nahavanona ny loza noho izy efa nisy tsy fitovian-kevitra tamin’ilay maty.
Nivoaka taorian’ny famotorana rehetra natao fa ity farany tokoa no tompon’antoka tamin’ilay habibiana. Natolotra ny fianakaviany ny razana rehefa vita fizahanan’ny mpitsabo, efa voatazona hanaovana fanadihadiana kosa ilay nahavanon-doza ary hatolotra ny Fitsarana aorian’izay.
Ankoatra izay, vehivavy iray ihany koa no hita faty nisy namono tany Antserasera, Kaominina Ankaratra ao anatin’ny Distrikan’Ambilobe. Ny sabotsy lasa teo hatrany no nahitan’ny fokonolona tao an-tanàna ny razana tao amina kirihitr’ala kely somary mihataka eo amin’ny 3km ny tanàna. Araka ny nambaran’ny ny teo anivon’ny Fokontany dia tsy isan’ireo mponina eo an-tanàna velively ity hita faty.
Ny fahitana ratra teny amin’ny vatany kosa anefa dia nanaporofo fa novonoina an-kitsirano ny tenany ka ny tombana nataon’ny olona no nahalalana fa mety notaperina tany amin’ny toeran-kafa ny ainy fa nariana tao an-toerana avy eo ny fatiny. Nidina nanao ny fizahana teny an-toerana ny Zandary niaraka tamin’ny mpitsabo. Ny fokonolona no nandray an-tanàna ny fandevenana ny razana rehefa tsy hita izay fianakaviany. Mitohy kosa ny fikarohana izay nahavanon-doza.